Kedu ihe bụ Polyvinyl Chloride na gịnị ka eji ya?
Polyvinyl Chloride (PVC) bụ polymer thermoplastic synthesized na plastik sịntetik nke atọ kachasị emepụta. Ebu ụzọ webata ihe a n'ahịa na 1872, ma nwee ogologo akụkọ ihe ịga nke ọma n'ọtụtụ ngwa. PVC na -apụta n'ọtụtụ dịgasị iche iche, gụnyere ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ, c ...
Kedu ihe eji eme Gumboots?
Ọ bụrụ na ị bịarutere na ibe a, ikekwe ị maara ihe gumboots bụ yana mkpa maka ịdị elu dị elu, akpụkpọ ụkwụ na -egbochi mmiri. Mana, ị kwụsịrị iche, kedu ihe eji akpụ mmiri ozuzo? Ọ dị mma, ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ na -enweghị mmiri bụ nke sitere na rọba eke ma ọ bụ polyvinyl chlor ...
Uru dị mkpa 4 nke iji PVC n'ime ụwa imepụta akpụkpọ ụkwụ
Ụwa nke imepụta akpụkpọ ụkwụ na imepụta ya etoola nke ukwuu n'ime narị afọ abụọ gara aga. Oge agakwaghị enwe otu igwe ịkwa akwa na -elekọta obodo niile. Mmepe ụlọ ọrụ mmepụta ihe ewetala ọtụtụ mgbanwe, site ka esi akpụ akpụkpọ ụkwụ ruo sel ...
Ezigbo ihe maka FOOTWEAR Industrial
Ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ chọrọ ihe nwere nguzogide dị elu, arụmọrụ dị mma, imepụta ihe ọhụrụ na ọdịdị dị elu. A na-emepụta ogige PVC iji mezuo ihe ndị a. Nhazi nke ogige PVC kwekọrọ t ...
Akụkọ banyere PVC
Oge mbụ achọpụtara PVC bụ na mberede na 1872 site n'aka onye na -ahụ maka kemịkalụ German, Eugen Baumann. Emere ya ka ọ bụrụ karama vinyl chloride ka ekpughere ya n'anwu ebe ọ na -agbaze. N'ọgwụgwụ 1800s otu ...